बेलुन वित्तपोषणले के गर्छ? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki बेलुन वित्त
एक गुब्बारे फाइनान्सिंग के हो?
एक गुब्बारे वित्त पोषणको साथ तपाईंले पहिले नै सम्झन सक्नुहुनेछ, तपाई सधै एक ग्राहकको रूपमा अधिक भुक्तानी गर्नुहुन्छ। तपाईंले सम्भवतः यो प्रकारको वित्तपोषण अघि देख्नु हुनेछ। कार डीलरशिपले आफ्ना ग्राहकहरूलाई धेरै मासिक किस्तहरू, डाउन भुक्तानीमा एक डाउन भुक्तानी र अन्तिम किस्तमा प्रदान गर्दछ, जुन सामान्यतया धेरै महँगो हुन्छ। यो ठूलो समापन दरको लिनचिन हो बेलुन वित्तकिनकि यहाँ ग्राहक सामान्यतया थाहा छैन जुन के हुँदैछ। हामी वैकल्पिक रूपमा खोजिरहेका प्रत्येक प्रकारको वित्तलाई विचार गर्नुहोस्। साथै, बेलुन वित्तपोषण यस्तो झण्डा लगाइएको छैन, तर तपाईं, ग्राहकको रूपमा, क्रेडिट फिजियन रोज्दा कहिलेकाहीँ तपाईं वास्तवमा तुलना गर्दै हुनुहुन्छ र कसरी मूर्ख हुनुहुन्छ।
तपाईंले यसलाई साकार नगरी किन्नु भएको कि किन्डिन्डिङ लोन
गुब्बारे ऋणको लोकप्रियता निस्सन्देही राम्रो छ। तर यो अनुकूल परिस्थिति संग गर्न छैन, तर यस तथ्य संग कि केहि निश्चित शर्तों को तहत अब पुन: गणना र ग्राहक अक्सर अभिभूत हुन्छ। यो गुब्बारे वित्त पोषण र एक उच्च मूल्य संग एक उपभोक्ता राम्रो खरीद को बारे मा छ। पहिलो प्रश्न सामान्यतया छ, म लक्ष्य पुग्छु र डीलरशिपमा हरेक प्रस्ताव गणना गर्दछु? स्मार्टफोन र इन्टरनेट जडानको लागि धन्यवाद, यो आज सजिलो हुनेछ र यसले बेलुन वित्त पोषणको प्रयोग गर्ने मनोवैज्ञानिक असर बताउँछ। सबै कुरा धेरै राम्रो देखिन्छ, मासिक साना किटाहरू, तपाईले प्राय: जम्मा गर्भएको वाहनको रूपमा भाग विनिमय र त्यसपछि अन्तिम किस्त, जुन बेलून फाइनान्सिंगको लागि मात्र भविष्यमा धेरै टाढा छ। यो एक गुब्बारे ऋण को सफलता को कारकहरु को वर्णन गर्दछ। तर तिनीहरू स्मार्ट हो र पछि पछि, किनकि गुब्बारे ऋणको अन्तिम किस्त कार कार ब्याजको सम्पूर्ण अवधिमा छ। यसले दर महँगो बनाउँछ र यसले सबै गुब्बारे फाइनान्सिंग महंगी बनाउँछ। त्यसोभए ऋणको लागी अन्तिम समाप्ति दर र यी गोलोन फाइनान्सिङहरू छन्। तर तपाईं कार डीलरशिप मा यस प्रकार को वित्तपोषण को न केवल मिलन हुनेछ किनकि केहि बैंक यस वित्त मा विशेषज्ञ बन गए हो। यहाँ कमाउन धेरै पैसा छ र विशेष गरी धेरै कम ब्याज दरहरूमा तपाईले तुलना गर्नु पर्छ र केवल असाधारण अवस्थामा मात्र ब्यालोन वित्तपोषण प्रयोग गर्नुपर्छ। साधारण दरहरूको साथ स्थापना क्रेडिट महंगी लाग्छ, तर तुलनात्मक रूपमा तुलनात्मक रूपमा। तपाइँ एक सयौं यूरोमा सामान्य वित्त पोषणमा बचत गर्नुहुन्छ र तपाइँको बैंकले सस्तो नयाँ कारलाई पनि सस्तो बनाउनेछ। मूल्यह्रासको बारेमा सोच्नुहोस् र यी कारकहरू हो जसले गुब्बारे ऋण प्रयोग गर्न ग्राहकहरूलाई धेरै प्रयोग गर्दछ। विशेष गरी कम ब्याज दरको समयमा, धेरै ग्राहकहरूले मात्र आशा गर्नुभएन र कुनै थप परीक्षा बिना गुब्बारे ऋण समाप्त नगर्नुहोस्।
गुब्बारे वित्त पोषण र व्यक्तिगत निर्णय
यी उच्च अन्त-दर क्रेडिटहरू सम्पूर्ण अवधिको अन्त्यमा ब्याज दरको साथ गुब्बारे क्रेडिट भनिन्छ। यो पदोन्नति आधिकारिक छैन, तर यो कार वित्त पोषण वा उपभोक्ता क्रेडिटको बारेमा हो, जुन बेलुका वित्त पोषणको रूपमा पेशेवर सर्कलमा उल्लेख गरिएको छ। मासिक दर सस्तो देखिन्छ, तर शब्दको समयमा सहनशीलताजनक हुन्छ, तर अन्तिम किस्त इन बैंकले कर्जा कमाएको हो। यहाँ, सम्पूर्ण अवधि को रुचि र अंतिम किस्त को राशि संग। यदि तपाईं गुब्बारे फाइनान्सिंग छनौट गर्नुहुन्छ भने तपाई सधैँ सामान्य किस्तरी ऋण भन्दा बढी तिर्नुहुन्छ। विकल्पहरू खोज्दै र तपाईंको बैंकको किस्त किन्नको उच्च दरहरू छन्, तर आफैमा गुब्बारे वित्त पोषण भन्दा कम खर्च गर्छ। त्यसैले तपाईं सधैं गुब्बारे वित्त पोषण गर्न विकल्पहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं बस यो एक गुब्बारे वित्त पोषण छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ।
अघिल्लो लेखजम्मा शुल्क